सिन्धुलीमा हास्य कलाकार काफ्ले वडाध्यक्षको दौडमा : 'तलब भत्ता नागरिककै सेवामा लगाउने छुुु' संघीयता कार्यान्वयनसँगै हुँदै गरेको स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनलाई अघिल्लोभन्दा फरक तरिकाले हेर्न थालिएको छ । अघिल्लो निर्वाचनभन्दा यस पटकको निर्वाचनमा नागरिक सचेत पनि भएका छन् । भोट माग्न जाँदा खोई अघिल्लो निर्वाचनका घोषणा पूरा गरेको भन्ने प्रश्न पनि उठाइने गरेका छन् ।
बिबिआइएनमार्फत ऊर्जा सहकार्य हुने, थप बिजुली लैजान भारत सहमत काठमाडौं । सरकारको सार्थक प्रयत्न एवं निरन्तरको कूटनीतिक प्रयासका कारण वर्षायाममा खेर जाने बिजुली खरिद गर्न भारत तयार भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले लगातार सरोकारवाला निकायसँग गर्नुभएको छलफल, मन्त्रालय तहमा भएको द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संवाद तथा कूटनीतिक पहलले सार्थकता पाएको ऊर्जा क्षेत्रमा चर्चा भइरहेको छ ।
विभेदको दलदलबाट मुक्त हुन पर्वतारोहणलाई रोजें, राष्ट्र र समुदायको शीर उँचो पार्ने अठोट छ : आरोही लामा [भिडियो] 'उमेरले ३१ लाग्यो । जिम्मेवारी पनि थपिंदै छन् । आफ्नो इच्छा र रहरहरु पनि पूरा गर्नु नै छ । दैनिक कामको चाप पनि बढ्दै गइरहेको छ । तर हिम्मत हारेको छैन,' यो भनाइ हो, आरोही शर्मिला लामाको हो । काभ्रेपलाञ्चोक, रोशी गाउँपालिकाको भिमखोरीमा जन्मनुभएकी शर्मिलाले अहिलेसम्म विश्वका सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित ७ वटा हिमाल आरोहण गरिसक्नुभएको छ ।
इन्डक्सन चुलोेले बदलेका बस्तीका कथा काठमाडौं । “विद्युतीय चुलोेको प्रयोग गर्ने बारेमा धेरैले चर्चा मात्रै गरे । हामीले काम ग¥यौँ । यसबाट असाध्यै राम्रो प्रतिक्रिया पाएका छौँ । अहिले माग धान्नै गाह्रो भएको छ” काभ्रेपलाञ्चोक तेमालका कल्पना लामाले सुनाउनुभयो ।
जनयुद्धमा हात गुम्यो, विश्वास गुमेन बनियानी । झापा कनकाई नगरपालिका–७ दुर्गापुरकी सुशीला कन्दङ्वा (वर्षा) जनयुद्धकी घाइते योद्धा हुनुहुन्छ । किताब, कलम र कापी च्यापेर विद्यालय जानुपर्ने बेला उहाँले आफ्नो नभई सबै नेपालीको सुनौलो बिहानीका लागि क्रान्ति तय गर्नुभयो ।
विपन्‍न परिवार भन्छन्- 'घर पायौं, धनीपुर्जा र रोजगारी कहिले त ?' झापा । चन्द्रबहादुर भुजेल बिहान उठेर आँगनको धारामा हातमुख धोएपछि सडकका छेउमा बाँसको मुडामा टुक्रुक्क बसेर चिया पिउँदै वरपर हेर्नुहुन्छ र मुस्कुराउनुहुन्छ । घर अगाडि टायल बिछ्याइएको फराकिलो सडक छ । छिमेकमा एकै रूप र शैलीका चिटिक्क घर छन् । बिजुलीले घर झलमल्ल छ । सिलिङमा जिप्सन लगाइएको छ ।
भूमि अधिकारको फरक आयाम : आदिवासीको भूमि अधिकार कसैले बुझेनन् नेपालमा केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको उदयपछि नेपाली जनता र सरकारबीच जमिन माथिको अधिकारका विषयमा बहस र संघर्ष निरन्तर चलिरहेको छ । औपनिवेशिक राज्य सत्ताको प्रारम्भबाट नै भूमिको स्वामित्व विभेदकारी हुँदै आउको हो । भनिरहन परोइन, तत्कालीन अवस्थामा भूमिको स्वामित्व निश्चित वर्गको स्वामित्वमा सिमित थियो ।
अमेरिका जाने लोभमा पर्दा ३४ लाख डुब्यो भने आफैँ मानव बेचबिखनको जालोमा काठमाडौं । अमेरिका जाने लोभमा पर्दा दुई व्यक्तिको ३४ लाख रकम डुबेको छ भने आफैँ मानव बेचबिखनको जालोमा फस्न पुगेका छन् । उनीहरु अहिले न्याय पाउँ भनी प्रहरीको शरणमा पुगेका छ्न ।
थारु बस्तीमा माघीको रौनकः महिलाको व्यस्तता बढ्यो कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका– ३ की सीता चौधरी सालका पातका दुनाटपरी बनाउने कार्यमा व्यस्त हुनुहुन्छ । दुई दिनअघि देखिनै उहाँले दुनाटपरी लगाउन थाल्नुभएको हो । माघी पर्वका लागि घरमा आउने पाहुनलाई परिकार पस्किनका लागि दुनाटपरी बनाउने कार्यमा उहाँ लाग्नुभएको छ ।
यस्तो छ प्रचण्डको राजनीतिक जीवन मुक्तिराम दाहाल र भवानी दाहालको सुपुत्रका रूपमा कास्कीको तत्कालीन ढिकुरपोखरी गाविस–१ लेवाडेमा जन्मनुभएका अध्यक्ष प्रचण्ड राजनीतिक रूपमा जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रिया, गणतन्त्र स्थापना, संविधानसभाको नेतृत्वकर्ताको हैसियतमा नेपालको राजनीतिमा क्रियाशिल हुनुहुन्छ ।
प्रचण्डको हातमा ट्याक्टरको स्टेरिङ थमाएपछि... नेकपा (माआवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड एउटा गाउँमा ट्याक्टरको स्टेरिङ घुमाउँदै हुनुहुन्छ । हो, कम्युनिष्ट नेताहरुको श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधिपात्र सरह देखिन्छ यो सिर्जना । त्यसैले स्वयं नेता प्रचण्डले पनि नकार्न सक्नुभएन, सिर्जनालाई राम्रो भन्नुभयो र एकैछिन भावुक बन्दै हेर्नुभयो ।
महिला आन्दोलन भित्रको विविधता नेपालका आदिवासी जनजाति महिलाहरुले महिला आन्दोलन भित्रको विविधतालाई स्वीकार गर्न मूलधारका महिलाहरुलाई आग्रह गरेका छन् । ‘महिला केवल महिला मात्र नभनेर महिला भित्र विविधता पनि हुन्छ ।’ राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चकी उपाध्यक्ष यशोकान्ति भट्टचनले भन्नु भयो– हाल चलिरहेको मूल प्रबाहको महिला आन्दोलनले यो विविधता स्वीकार गर्न सकेको छैन ।
हेर्नुहोस् कांग्रेस सभापतिमा विजयी देउवाको जीवनी काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेपाली राजनीतिमा छ दशकदेखि निरन्तर क्रियाशील व्यक्तित्वको रुपमा स्थापित हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री देउवा मङ्गलबार सम्पन्न पार्टीको १४औँ महाधिवेशनअन्तर्गतको पुनः मतदानबाट पार्टी सभापतिमा पुनः निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँले निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी डा शेखर कोइरालालाई पराजित गर्नुभएको हो ।
‘पराग’को ३२ वर्षे राजनीतिक यात्रा : 'भैंसी बेचेर माओवादीमा होलटाइमर बनेँ' जन्म ‘पराग’अर्थात् खेलप्रसाद बुढाक्षेत्री, माओवादी आन्दोलनका एक अविचलित सिपाहीको नाम हो । उहाँको जन्म २०३२ साल मंसिर १२ गते ताप्लेजुङकको पेदाङस्थित चिच्याङ भन्ने ठाउँमा भएको हो । गरिब किसान परिवारका बुबा स्व. शम्सेरबहादुर बुढाक्षेत्री र आमा स्व. बिष्णुमाया बुढाक्षेत्रीका कान्छो छोराका रुपमा जन्मिनुभएका खेलप्रसादको बाल्यकाल निकै अभावका बीच गुज्रियो । सिंगो परिवारको जीविकोपार्जनको एउटै आधार कृषि थियो
बाल्यकालमै रमाइलो थियो, अहिले जिम्मेवारीले बाँधियो मेरो जन्म हालको मध्यपुर थिमिको पाचो टोलमा भएको थियो । बुवा आफ्नो व्यावसायिक सिलसिलामा म सानै छँदा हेटौंडा बसाइँ सर्नु भयो । बुवा आमा सँगै मलाई र दिदीलाई पनि हेटौंडा लिएर जानु भयो । अनि हाम्रो आधारभूत शिक्षा उतै सुरु भयो । मेरो दाजु भने थिमिमै बसेर पढाई गर्नु हुन्थ्यो । बुबाको संयुक्त परिवार भएकोले दाइलाई खासै समस्या थिएन ।
संघर्ष र सफलताको कथा : लिला सेलिङ माबो पूर्वी लिम्बुवान याङरक ओयाम लिम्बू बाहुल्य रहेको गाउँमा जन्मेकी हुन् लिला सेलिङ माबो । साढे ४ दशकअघि उनी जन्मन्दा गाउँमा संचार, यातायात, विद्युत् सुविधा केही थिएन । गाउँकै सरकारी स्कुल गुप्तेश्वर माविबाट ‘कपुरी क’, सुरु गरेकी लिला आज बेलायतको प्रतिष्ठित युनिभरसिटी अफ सरेबाट स्नात्तोकर गर्न सफल भएकी छिन् । यही वर्ष युनिभरसिटी अफ सरेबाटै क्रिमिनलोजी (कर्पोरेटिभ क्राइम एण्ड करपोरेटिभ रेस्पन्सिसिविलिटी) मा सफल्तापूर्वक एमएसी पूरा गरिन् ।
यस्तो छ प्रधानमन्त्री देउवाको चिनारी काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पाँचौपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नु भएका शेरबहादुर देउवाले आइतबार प्रतिनिधिसभामा अत्यधित विश्वासको मत पाउनु भएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ सरकार गठनका सम्बन्धमा परेका विभिन्न निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै असार २८ सोमबार पुनःस्थापनाको फैसलाका साथ सभापति देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
बेलायतवासी समाजसेवी चित्रबहादुर गुरुङ सरल र मिजासिला स्वभावका पूर्वगोर्खा सैनिक चित्रबहादुर गुरुङको अचेल अधिकांश समय तमु समुदायको हितमा बित्ने गरेको छ । आफ्नै 'कमान्ड'मा स्थापना भएको तमु समाज यूकेबाट गुरुङले सामाजिक कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
लोकदोहोरीका सुपरस्टार पशुपतिको संघर्षको कथा काठमाडौं । स्याङ्जाको पुतलीबजारमा २०४० साल कात्तिक १४ गते जन्मिएका पशुपति शर्माको बाल्यकाल पुतलीजस्तै गाउँदै रमाउँदैमा बित्यो ।